Dowladda Kenya oo mar kale ku xad gudubtay qaranimada Soomaaliya | Dooxo Diaspora Forum - Golaha Qurbo Joogta Dooxa
Home Articles Dowladda Kenya oo mar kale ku xad gudubtay qaranimada Soomaaliya
Dowladda Kenya oo mar kale ku xad gudubtay qaranimada Soomaaliya
Dowladda Kenya ayaa qorsheyneysa iney xafiisyo diblomaasiyadeed ka furato Somaliland si ay ugu adeegto muwaadiniinteeda ka jooga dhulkaas, sida lagu sheegay qoraal kasoo baxay xafiiskooda magaalada Hargeysa.
Inkastoo aan la ogeyn wakhtiga rasmiga ah oo ay furayaan xafiisyada ay ugu adeegayaan muwaadiniintooda, haddana qoraalka kasoo baxay xafiiska wuxuu si cad ugu xad-gudbayaa qaranimada Soomaaliya maadaama uu waddan ku tilmaamay Somaliland.
“Kenya waxey ku faraxsan tahay in Somaliland ay ku nool yahiin muwaadiniin badan oo Kenyaan ah kana shaqeystaan, waxaana ka shaqeyneynsaa inaan xafiis diblomaasi ka furno halkaas,” ayaa lagu yiri warka qoraalka ah.
“Tani waxey sii ballaarineysaa xafiisyada labada waddan, waxeyna muwaadiniinta Kenya siineysaa in ay helaan adeegyada dowladooda” ayaa lasii raaciyay qoraalka.
Wafdi ka socda Kenya ayaa mudooyinkii lasoo dhaafay gaarayay Hargeysa iyadoo la filayo iney kuwa kalana halkaas gaaraan.